पर्सा मालपोत कार्यालयमा किर्तेमाथि किर्ते
You are at Home पर्सा मालपोत कार्यालयमा किर्तेमाथि किर्ते
वीरगंज, ७ साउन÷ मालपोत कार्यालय, पर्सामा किर्ते गर्दै जग्गाहरु बिक्री गरिरहेको समाचार अनुसार पर्सा जिल्ला, लालपर्सामा रहेको किनं. ५० को १ बिघा १ कट्ठा जग्गा भूमाफियाहरुले किर्ते गरी बिक्री गरेको पाइएको छ ।
२०२१ साल र २०४६ सालको नया नापीमा समेत सार्वजनिक ऐलानी रहेको किनं. ५० को सो जग्गा अहिले दुई जनाको नाममा बिक्री वितरण भएपछि मालपोत कार्यालयले श्रेस्ता बदर गरेको छ । यो जग्गा नापी शाखाको फिल्डबूक उतारमा अहिले पनि सार्वजनिक नै कायम छ ।
मालपोत कार्यालयमा रहेको प्रमाण अनुसार उक्त जग्गा श्रेस्ता नं. ३८१८ बाट आएको भनी सर्वप्रथम सन्तोषकुमार कलवारको नाममा रजिष्टे«शन गरिएको छ। तर मालपोतमा ३८१८ नं.को श्रेस्ताको पाना नै छैन । ३८१७ र ३८१९ रहे पनि ३८१८ को श्रेस्ता गायब गरेर कलवारको नाममा रजिष्टे«शन गरिएको र सोही आधारमा सन्देश्वरको नाममा पछि बिक्री गरिएको थियो ।१ बिघा १ कट्ठा सार्वजनिक जग्गा डेढ करोडभन्दा बढी भएको बताएको छ ।
मालपोत कार्यालय, पर्सामा रहेको तथ्याड्ढ अनुसार यो सार्वजनिक जग्गा २०७१÷४÷४ गते वीउमनपा–९ बस्ने सन्तोषकुमार कलवारले सर्वप्रथम आप्mनो नाममा गरेका थिए । त्यसपछि सोही जग्गा २०७२÷२÷१३ गते किनं. ६४१ र ६४२ गरी १७ कट्ठा ४ धुर वीउमनपा–१८ बस्ने सन्देश्वर शर्माको नाममा नामसारी भएको थियो ।
कार्यालय ऐन २०३४ को दफा २४ को उपदफा २ अनुसार सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको अवस्थामा पनि स्वतः खारेज गर्ने अधिकारको प्रयोग गरेर खारेज गर्ने सकिने छ । प्रमुख प्रकाश पोखरेलले आफुलाई एस घटना बारे केहि पनि थाहा नभएको बताउनु भयो।